Ndezvipi zvibereko zveMweya Mutsvene ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ndezvipi zvibereko zveMweya Mutsvene. Zvinoenderana naVaGaratia 5: 22-23, chibereko cheMweya rudo, mufaro, rugare, moyo murefu, mutsa, runako, kutendeka, unyoro, uye kuzvidzora. Iyi ndiyo mhedzisiro yehupenyu inotungamirirwa neMweya Mutsvene.
Kana mumwe munhu akagamuchira Jesu semuponesi wavo, Mweya Mutsvene unotanga kugara mukati memunhu. Shandura hupenyu hwako. Chibereko cheMweya chibereko chekuita kweMweya Mutsvene muhupenyu hwevatendi.
1 Sei chibereko cheMweya uye kwete zvibereko zveMweya?
2 Chii chiri chibereko cheMweya muhupenyu hwevatendi?
2.1 Ungavandudza sei chibereko cheMweya muhupenyu hwevatendi?
3 Ndezvipi zvibereko zveMweya Mutsvene
3.1 2. Mufaro
3.2 3. Rugare
3.3 4. moyo murefu
3.4 5. Ushamwari
3.5 6. Mutsa
3.6 7. Kuvimbika
3.7 8. Unyoro
3.8 9. Own Domain
4 Ndezvipi zvibereko zvenyama
Sei chibereko cheMweya uye kwete zvibereko zveMweya?
Muchinyorwa chaVaGaratiya 5: 22-23, mupositora Pauro anoshandisa izwi rekuti muchero mune vamwe. Pfungwa yekutanga ndeyekuti mhedzisiro yechibereko cheMweya hunhu, hunhu. Hunhu uhu hunofanirwa kuraramwa muhupenyu hwemutendi, kuitira kuti chibereko chizadzike uye pave nekubatana!
Asi chibereko cheMweya rudo, mufaro, rugare, moyo murefu, moyo munyoro, kunaka, rutendo,
unyoro, kuzvidzora; hakuna mutemo unopikisa zvinhu zvakadai.
VaGaratia 5: 22-23
Ngatimbofungidzirai tsumbu remazambiringa apo sumbu iri chibereko cheMweya uye mazambiringa ndiwo hunhu. Kana, netsaona, rimwe ramazambiringa aya rikaora, rinosvibisa boka rose.
Saka zvinoita sekunge Pauro arikusimbisa kunaka kwakakosha sei, asi kunyanya kuve mukubatana uye kurarama nemutendi, nokudaro uchiramba mabasa enyama.
Chii chiri chibereko cheMweya muhupenyu hwevatendi?
Chaizvoizvo, tinogona kutaura kuti ari kuramba hupenyu hwekutadza uye ndiwo mhedzisiro yekuvapo kweMweya Mutsvene muhupenyu hwemutendi.
Chibereko cheMweya muhupenyu hwemutendi Hupenyu naJesu, mune iyo yatinoteerera kunaIshe uye nekugona kufamba neMweya Mutsvene.
Kana isu tichipa hupenyu hwedu kunaIshe, panguva iyoyo Mweya Mutsvene unotanga kugara matiri uye, kuburikidza naye chete, chibereko chinogadzirwa matiri. Kana ichi chibereko chikagadzirwa, chinosara kwehupenyu hwese.
Naizvozvo, rimwe rebasa reMweya Mutsvene paanotanga kugara muhupenyu hwemutendi, ndere tanga kushandura munhu uye chete kuMweya Mutsvene ndiani anogona tibatsire kukunda muhondo yenyama yedu.
Ungavandudza sei chibereko cheMweya muhupenyu hwevatendi?
Tinofanira kupa hupenyu hwedu kuna Jesu, "kuberekwa patsva”Uye tichagamuchira Mweya Mutsvene saka kuti rinogara matiri. Sezvo Mweya Mutsvene anogara matiri, anotanga kuita kutibatsira kurwisa mabasa enyama (hupombwe, ufeve, kusachena, ruchiva, kunamata zvifananidzo, uroyi, kutsamwa, dzidziso dzakatsauka, shanje, kudhakwa, makaro). Kurangarira kuti avo vanoita zvinhu zvakadaro havazogari nhaka yeHumambo hwaMwari.
Naizvozvo, iri kurwisana nehunhu hwedu hwevanhuAsi chete nerubatsiro rweMweya Mutsvene ndipo patinozokwanisa kukudziridza hunhu hwechibereko cheMweya kuti tikunde icho, nekudaro, kana tichigara muMweya, isuwo tinofamba muMweya.
Rondedzero iri munaVaGaratia ipfupiso yemhedzisiro huru yehupenyu naKristu, kunaka kwechibereko cheMweya:
Mwari rudo uye wese ana Mwari ane rudo. Ndiwo musimboti wechibereko cheMweya. Zvakare, iwo murairo mukuru wemuBhaibheri: "Ida Mwari pamusoro pezvinhu zvese uye nemuvakidzani wako sezvaunozviita" ( Mateo 22:36-39 ).
Muna vaRoma 5: 5 tinozviona izvozvo rudo rwakadirwa mumoyo yedu kuburikidza neMweya Mutsvene. Irwo rudo rusina mvumo, rwunofanirwa kuitwa mukufarira vese, pasina mutsauko. Rudo mafungire kwete kunzwa.
uye tariro haina nyadzi; Nekuti rudo rwaMwari rwakadururwa mumoyo yedu neMweya Mutsvene wakapihwa kwatiri.
VaRoma 5: 5
Muna Jesu tinazvo mufaro wechokwadi nekuti tine tariro uye tinoziva kuti isu takaponeswa. Na Mwari, kusuwa ingori chikamu, mufaro unogara uchidzoka.
Mufaro hauna kufanana nemufaro! Mufaro wakabatana nemamiriro ezvinhu, ndosaka uchidarika. Mufaro unoramba uri munguva dzinosuwisa, nekuti nematambudziko nematambudziko atinosangana nawo, tinowana kugona kukudziridza mufaro wechokwadi.
Naizvozvo, mufaro hauna kusungwa nemamiriro ezvinhu.
Bhaibheri rinodzidzisa izvozvo tine rugare naMwari kubudikidza naJesu. Mwari Samasimba ishamwari yedu zvino. Isuwo tine dzidziso yebhaibheri iyo runyararo urwu runofanirwa kudzivirira moyo yedu kubva chero kunetswa kana kutya, chero mamiriro ezvinhu. Runyararo urwu, sechibereko cheMweya, ichokwadi uye izere.
4. moyo murefu
Tsananguro yakanakisa yekushivirira ndeye mwoyo murefuNekuti kutsungirira sechibereko cheMweya hakusi kungomirira, asi kugona kuramba uchitsiga, kunyangwe paine dambudziko.
Significa iva nechivimbo chekuti izvo zviri kudyarwa zvichakohwewa panguva yakafanira. Mwoyo murefu (moyo murefu) unoita kuti tigadzirire ivhu uye nekudyara mbeu isu takamirira mvura.
Maitiro atinoita vanhu anochinja nekuti tinoona kukosha kwavo kuna Mwari. Kuva nemutsa kana kuratidza mutsa kuva netsitsi, ngoni, uye kuva nerupo kune vamwe.
Ndipo patinoisa imwe pakutanga, nekudaro tichiramba yedu "Ini". Yakabatana nerudo, saka tinorayirwa kuratidza mutsa. Naizvozvo, zvinoreva kuti hatifanire kukonzera kurwadziwa kune chero munhu.
Mutsa uri kuita zvakanaka, kwete kufadza vanhu, asi kuita izvo zvakanaka uye zvine ruramisiro. Kunaka kunogadzirwa matiri neMweya Mutsvene uye kunotigonesa kutarisa chokwadi uye nezvakanaka. Naizvozvo, zvinotitungamira kuti tirambe zvese zvine chekuita nehuipi nehuipi.
Zvatinoona zvakanyanya munyika medu ndizvo kutendeseka kwemamiriro, iri mhando yehukama "hwenzvimbo" hunowanzoenderana nehukama hwehukama, uye zvakare nezvehunhu hwemumwe munhu.
Kana paine fungidziro yekuti mumwe munhu haachavimbika, kuvimbika kunotora chigaro chekumashure.
Kutendeka, sechibereko cheMweya, ndizvo kuvimbika kune mumwe munhu, pasina kudzorerwa, inoratidza kutendeka kwaMwari. Ishe vanogara vakatendeka, kunyangwe isu tisina kutendeka.
Naizvozvo, imwe yemiedzo mikuru iyo kutendeka kuri kukura muhupenyu hwedu ndipo patinoramba takatendeka kunaIshe, kwete nekuda kwezvaVanotiitira kana zvavanogona kutiitira, asi nekuda kweZvavari.
Unyoro ndihwo kugona kudzikama uye kuita wakadzikama kunyangwe mune zvisingafadzi mamiriro. Chinhu chinozarura cheunyoro, sechibereko cheMweya, chiri kurega iwe uchitungamirwa naMwari, segwai rinotungamirwa nemufudzi.
Unyoro hunofanira kutanga kukudziridza muhukama hwedu naIshe uyezve hunozoratidzwa mukuzvibata kwedu nevamwe.
9. Own Domain
El Kuzvidzora, mupfungwa yepakutanga yeshoko iri, rinotsanangura iyo kugona kwemunhu kuzvibata, sezvo kumwe kwekurwira kukuru vanhu vanopesana nezvido zvavo. Kana pasina kuzvidzora, zvimwe zvinhu zvinoitika, semuenzaniso, kubva pachinangwa chaIshe.
Nekudaro, nerubatsiro rweMweya Mutsvene, zvinokwanisika kuti tiunze kuzvidzora nekuzvichengetedza pachedu, uye izvi zvichatibvumidza kuziva maitiro ekuita kana nguva yacho yakwana, ichatibvumidza kumirira pazvinofanirwa kumirira .
Ndezvipi zvibereko zvenyama
Chibereko cheMweya chakapesana nemuchero wenyama (hupenyu hwechivi). Anoti chibereko chenyama ndeichi: hupombwe, kusachena, hunhu, kunamata zvidhori, huroyi, ruvengo, kupesana, godo, hasha, udyire, kupesana, mapato, shanje, kudhakwa, madhiragi nezvimwe zvakadaro.
Naizvozvo, ngatirangarirei izvozvo anovandudza muchero uye kunaka kwawo Mweya Mutsvene, asi kuti izvi zvinokurumidza sei kuitika kwatiri.
Isu tinongokudziridza chibereko cheMweya nekukurumidza zvakanyanya apo kuteerera kwedu kunaIshe kuri kuwedzera, saka hupenyu hwedu huchave zvakanyatso shandurwa uye zvinofurira vamwe kuti vatevedze nzira imwe chete.